MYTCL Monthly News Letter | Myanmar Yang Tse Copper Mine | MYTCL
MYTCL Monthly News Letter
We welcome you to the latest update of the Myanmar Yang Tse Copper Mining Limited Newsletter.
မြန်မာယန်စီကြေးနီသတ္တုတွင်းလီမိတက်၏ နောက်ဆုံးရသတင်းစာစောင်ကဏ္ဍမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
To view the fascinating insights into the activities occurring at MYTCL and within our communities, click on our link below and takeatour of the latest events.
Trouble to view this email? Click here
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာယန်စီကြေးနီသတ္တုတွင်းလီမိတက် အဖွဲ့အစည်း၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော လတ်တလော လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိလိုပါလျှင် အောက်ပါ လမ်းညွန်အညွှန်း ကို နှိပ်ပြီး ဝင်ရောက် လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Email ကြည့်ရန်အခက်အခဲရှိပါက ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။
Labour Law & Factory Investigation Department Inspection
On May 13th MYTCL was honoured to have the team members from the Labour Law & Factories Investigation Department visit the S&K Mine Site for an afternoon of inspections and conversations with the Senior Myanmar Staff, U Ohn Lwin Myint, U Than Naing Soe, U Thein Soe, U Lwin Myo Aung, U Kyaw Wai, and the Operations Manager of MYTCL, Mr. Wallis. Joining them was the esteemed Senator from Salingyi, Dr. Thein Naing and the Salingyi Township Administrator, U San Myint.
MYTCL Disinfection Chamber
Recently, innovative approaches have been generated in the disinfection process to assist in reducing the transmission of COVID-19. A variety of approaches has been invented to execute the disinfection process, physically via box, chamber, tunnel, partition, confined space or gate. Automatic dispersion of disinfectant to individuals is activated onceaperson steps in or passes through the box, chamber, tunnel, partition, booth or gate, which is made possible by an infra-red sensor or motion sensor embedded in the device. The spraying process takes approximately 20 to 30 seconds in each round of disinfection.
Mine Town Temporary Market
Our Mine Town Health Management Working Committee Group completes activities to prevent the spreading of the COVID-19 within in our Mine Town area.
အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် စက်ရုံစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနမှ စစ်ဆေးခြင်း
မေလ ၁၃ရက်နေ့ မြန်မာယန်စီတွင် အလုပ်သမားဥပဒေနှင့် စက်ရုံစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနမှ အရာရှိများနှင့် မြန်မာယန်စီမှ အရာရှိဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးအုန်းလွင်မြင့်၊ ဦးသန်းနိုင်စိုး၊ ဦးသိန်းစိုး၊ ဦးလွင်မျိုးအောင်၊ ဦးကျော်ဝေနှင့် operation မန်နေဂျာ Mr.Wallis တို့နှင့် တွေ့ဆုံ၍ စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆားလင်းကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော ဒေါက်တာသိန်းနိုင် နှင့် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဆန်းမြင့်တို့လဲ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
မကြာမီက COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှု လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်စမ်းသပ် ခဲ့ကြပါသည်။ အခန်း၊ အလုံပိတ်နေရာ၊ အကန့်အသတ်ရှိသောနေရာ သို့မဟုတ် ဂိတ်နေရာမှတစ်ဆင့် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တီထွင်ခဲ့ကြပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးကိုအလိုအလျောက်ပျံ့နှံ့စေခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဦး သည်အခန်း၊ အလုံပိတ်နေရာ ကန့်သတ်ထားသောအခန်း သို့မဟုတ် ဂိတ်သို့ဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် အာရုံခံကိရိယာ သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုအာရုံခံကိရိယာထည့်သွင်းထားသော ဆင်ဆာမှ စတင်အလုပ်လုပ်ကာ ပိုးသတ်ဆေးရည် အလိုအလျောက်စတင်ဖျန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းရန် ကြာမြင့်ချိန်မှာ စက္ကန့် ၂၀ မှ ၃၀ ခန့်အထိရှိသည်။
မိုင်းမြို့ကျန်းမာရေးကော်မတီသည် မိုင်းအတွင်း COVID-19 ရောဂါမပျံ့ပွားရေးအတွက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
Myayake School Building Construction
Education improves one's knowledge, skills, and develops personality and attitude. Education is important for everyone. Community development and education improvement has always beenapriority for MYTCL’s surrounding villages. In fact, for both the villages and Yang Tse, this isapriority.
ပညာရေးသည်လူတစ်ဦး ၏ဗဟုသုတ၊ အရည်အချင်းများကိုတိုးတက်စေပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် သဘောထားကိုတိုးတက်စေသည်။ ပညာရေးသည်လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးသည်။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပညာရေးတိုးတက်မှုသည် CSR ကျေးရွာများအတွက်အမြဲတမ်း ဦး စားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာယန်စီသည်ဤ အချက်ကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးစဉ်းစားပါသည်။
You are receiving this mail because you have subscribed to our Newsletter. If you wish to unsubscribe, please click here Unsubscribe to terminate any further newsletters from MYTCL.
ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းစာစောင်ကဏ္ဍတွင် ဝင်ရောက်ထားခြင်းကြောင့် သင်သည် ဤမေးလ်ကို လက်ခံရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းများကို သင့်ထံသို့ မပေးပို့စေလိုပါလျှင် ဤနေရာတွင် Unsubscribe နှိပ်ပြီး MYTCL ၏သတင်းစဉ်များ ရရှိခြင်းမှ ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်
70 (i) Bo Chein Street,
Pyay Road, Hlaing Township,
Facebook Facebook www.myanmaryangtse.com.mm & www.myanmaryangtse.com